Ganacsiga Elektroonika ah oo soo gaaray Soomaaliya - Halbeeg News
Ganacsiga Elektroonika ah oo soo gaaray Soomaaliya
Soomaaliya waxa ay u muuqataa dal uusan ka hirgeli karin garoonka Elektroonika, waayo waa mid ka mid ah dalalka ugu faqrisan dunidan, dagaal ka socday dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay, waa dal aan laheyn nidaam boosto oo shaqeynaya sidoo kale dadka isticmaala internet-ka waa lanbar aad u yar.
Laakiin Safiya oo madaxa maaliyadda ka ah mid kamid ah jaamacadaha ku yaalla Muqdishu waxa ay jeceshahay in ay Internet-ka ka dukaameysato maxaa yeelay waqti badan oo kaa lumi lahaa ayaa kuu baaqanaya, wax ay soo saartay makiinadda Khudaarta lagu shiido oo xafiiskeeda taallay taas oo ay sheegtay in ay kasoo iibsatay internet-ka.
“Ma helo waqti aan kusoo dukaameysto, wax walbana kama heleysid suuqyada internet-ka ee Muqdisho maxaa yeelay wey ku cusub yiyiin dalka, balse horumar ayey sameynayaan wax aan rajeynayaa in wax walba dhamaan dukaamada internet-ka laga heli doono” ayey tiri Safiya Axmed.
Qeybo kamid ah dalka waxaa gacanta ku haya ururka Al-shabaab oo xiriir la leh urur weynaha caalamiga ah ee Al-Qaacida balse xasiloonida sii kordheysa ee ka jirta caasimadda ayaa soo jiidatay Soomaali badan oo ku nool dalka iyo dibadda in ay maalgashi sameeyaan.
Safiya waxa ay makiinadda khudaarta ka dalbay dalbatay suuqa Soomar oo ah suuq Online ah oo la aasaasay labadii sano ee lasoo dhaafay waxaadna ka heli kartaa 25,000 oo alaabood laga bilaabo kalluun fareesh ah, qalabka elektarooniga iyo qalabka xafiisyada.
Madaxweyne Farmaajo oo golaha wasiirada faray inay ansixiyaan sharciga doorashooyinka
Kulan looga hadlayo ilaalinta xaquuqda caruurta oo lagu qabtay Muqdisho.